Norway Oo Xilkii Ka Xayuubay Wasiir Cunsuri Ah Oo Africa Hanjabaad U Tagay – Heemaal News Network
Wasiirka socdaalka ee Norwey ayaa qaxootiga uga digay inay si tahriib ah uga soo gudbaan xeebaha Libya, si ay Yurub u gaadhaan, waxana uu tilmaamay in Yurub ay ka tashatay qaabilaada qaxooti ka soo galay dhinaca badda.
Isagoo la hadlayey qoxootiga ku sugan xero qaxooti oo ku taal Rwanda ayaa wasiir Joran Kallmyr wuxuu dadka qaxootiga ah ka codsaday inay saaxiibadooda kale iyo walaalahood uga digaan jidka tahriibta ah ee Libya ee halista badan, waxana uu yiri: “Waxaa muhiim ah in la siiyo kuwa doonaya inay Libya u tahriibaan calaamada digniinta ah ee la macnaha ah—ha aadin Liibiya haddii aad rabto in lagu qaabilo—waa muhiim in halkan Rwanda ay iska diiwaangaliyaan iskana dhiibaan, hadaba, ha tagin Libiya oo naftaada khatar ha galin adiga oo is leh Yurub gaadh, Yurubna sidaas kuma tagi kartid”
Mr Kallmyr ayaa booqanayay xarumaha qaxootiga ee Rwanda maalintii Isniintii si uu qoxootiga ugu xaqiijiyo in laga shaqaynayo balan qaadkii dalkiisa ee ahaa in uu qaabilidoono 600 oo qaxooti ah.
Wuxuu sheegay in Norway ay si taxaddar leh u baadhayso, kiisaska dadka qoxooti-nimada isku dhiibay, si ay meesha uga saarto dadka aan qaxootiga ahayn, balse ujeedkoodu yahay dhaqaale abuurka, kuwaas oo qoxootinimada ku dhex gabada.
Waxa ay ahayd dhawaan markii Rwanda ay ogolaatay in ay degenaasho siiso 500 oo qaxooti oo ku sugnaa Libya, kuwaas oo si iskood ah u ogolaaday in Libya laga kexeeyo loona duuliyo Rwanda.
Marka laga reebo Norway, waxa jira balanqaadyo kale oo qaabilaad dhinaca qaxootiga ah oo laga helay dalal reer galbeed ah kuwaas oo ay ka mid yihiin Kanada oo oggolaatay inay qaadato 800 oo qaxooti ah, France oo qaabilaysa 200 oo qaxooti ah, iyo Sweden oo qaabilaysa 150 qaxooti ah, kuwaas oo dhamaantood ah qaxootiga laga soo daadgureeyay Libya ee la soo dajiyay Rwanda.
Waqtixaadirkan Libya waxa ku sugan in ka badan 3,000 oo muhaajiriin ah kuwaas oo ku xayiran dalkaasi Liibiya.
Dhinaca kale Wasiirkan Reer Norway ee hanjaabada Qaxootiga u tagay Africa ayaa ka tirsanaa xisbi xag jir ah oo dhinaca cunsuriyada u jandheedha, waxana Wasiirkan iyo 6 xubnood oo kale oo ka tirsan xisbigiisa laga saaray dawlada wadaaga ah ee Norway, kadib markii ay isku dayeen inay ka horyimaadaan go’aanada dhinaca bani’aadanimada ah ee ay raysal-wasaarada dalkaasi qaadatay